Maxameded Cumar Xabeeb iyo Col. Cabdullahi Yusuf oo isku khilaafay ciidanka la keenayo Sh/Dhexe
Buluugleey July 11, 2005
Guddoomiyaha Guddiga Siyaasadda Gobolka Sh/Dhexe Maxamed Cumar Xabeeb (Maxamed-dheere) iyo Col. Cabdullahi Yusuf Axmed ayaa ku kala booday aragtida ciidanka la keenayo magaalada Jowhar. Waxaa warar lagu kalsoonyahay ay sheegayaan in kulankii Col. Cabdullahi Yuusuf iyo Guddoomiyaha guddiga Siyaasadda Gobolka Sh/Dhexe Maxamed Dheere ku dhexmaray magaalada Gaalkacyo uu ku dhamaaday is afgarashawaa. Taasina waxay ka danbeysay markii uu mudane Maxmed Dheere uu soo jeediyay in ciidanka uu Col. Cabdullahi Yusuf la imaanayo magaalada Jowhar aynan tiradooda ka badan 200 oo ciidan illaalo ah. Halka uu Col Cabduillahi Yusuf uu go’aansaday in ciidan aad u tira badan oo ku filan la yimaado Gobolka Sh/Dhexe kadibna ku weeraro magaala madaxda Muqdisho.
Ilaa hadda waxaa la xaqiijiyay in ciidan fara badan uu Col. Cabdullahi weli ururintooda ku mashquulsanyahay iyaga oo wararka qarkiis ay sheegayaan in ciidanka badankooda uu kala yimid gobolka Waqooyi Bari, haatana uu ku hawsheeda wado ciidan kale oo laga soo ururiyo magaalada Gaalgacyo oo haatan ku suganyahay.
Col. C/laahi Yuusuf ayaa doonayo inuu u kicitimo dhinaca Xudur halkaas oo ugu diyaar ah ciidan kale kaddibna soo aado magaalada Jowhar.
Arrintaas ayaa Guddoomiyaha guddiga Siyaasadda Gobolka Sh/Dhexe Maxamed Cumar Xabeeb la yaab ku noqotay wuxuuna xaqiiqsaday tirade ciidanka la socda Col. Cabdullahi Yusuf in joogitaankooda qaadi Karin Gobolka Sh/Dhexe.